IPharadesi Lilindelwe! Phila njengendawo yasendaweni e-Staniel Cay
Phila njengomuntu wasendaweni kulesi situdiyo esinomnotho esihle ezintini. I-White Lily itholakala ibangana nje ukusuka esikhumulweni sezindiza futhi ihlanganisa ikhishi eligcwele, elenza lilungele labo abafuna ukuphumula e-Bahamas ngaphandle kokuphula ibhange. Uma ufuna indawo ethokomele wena nozakwenu eningalala kuyo enhliziyweni yempilo yasendaweni, ningabheki kude ngaleli khaya eliqashisayo leholide!
Lesi studio sitholakala enhliziyweni yendawo yangakini. Imizuzu embalwa nje ukusuka esikhumulweni sezindiza futhi ngokulinganayo eduze nezitolo zegrosa esiqhingini.
Izinqola zegalofu ziyatholakala ukuze ziqashwe ukuze kufinyeleleke kalula emabhishi nasezindaweni zokudlela.
Uzobe uphila isipiliyoni sasendaweni sangempela. Ngezansi nje kukhona umbhangqwana oshadile wendawo lapho ungabona khona uNkosikazi ephotha utshani ukuze awuthumele eNassau ukuze enze obhasikidi noma nje ehlezi kuvulandi nenkomishi yetiye.
Indawo ezungezile e-Exuma Cays igcwele uhambo! Izinto ezihehayo njengezingulube ezibhukudayo, oshaka abafuywayo e-Compass Cay, i-Thunderball Grotto kanye noxamu bomdabu kuyindlela nje efushane yokuhamba ngesikebhe.
Siyakwazisa ubumfihlo bakho, kodwa simane sikushayele ucingo noma nini lapho usidinga.